​नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्को धक्का : रेमिट्यान्समा गिरावट
Tuesday, 18 Oct, 2016 4:54 PM
देशमा राजनीतिक अस्थिरता ,कमजोर सुशासनकै कारण अवसरबाट बञ्चित कैयौ यूवाहरु विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन । मुलुकमा दिनप्रतिदिन बेरोजगारी संख्या बढेसँगै काम र अवसरको खोजीमा विदेशिनेक्रम बढ्दै गयो । २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीको लागि मुलुक छाडेर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा छ ।
यसैको परिणाम स्वरुप आ.व. २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु. २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा आ.व. २०७१/७२ मा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब रह्यो जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.१ प्रतिशत हुन आउँछ ।विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा नेपाल २३ औं स्थानमा छ । २०७२/०७३ मा अन्तिम श्रम स्विकृतिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने गत अघिल्लो बर्षको तुलनामा १८ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ अर्थात ४ लाख १८ हजार रहेको छ । अघिल्लो बर्ष यसको संख्या २ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेर ५ लाख १२ हजार रहेको थियो । यसरी बैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्यामै गिरावट आएपछि विप्रेषण आप्रवाहमा असर पर्छ नै ।
नेपाल जस्तो कम विकसित देश कृषि पछिको दोस्रो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र हो । सरकारले रोजगारीका लागि विदेशिनेलाई लक्षित गर्दै फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नीति ल्याएपनि त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न सकेको छैन् । व्यवसायीहरुले नै यसलाई असहयोग गर्दै आएका छन् । यसकारण पनि विदेशिनेको संख्यामा गिरावट आएको कतिपयको आँकलन छ ।
गत साउन महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २.५ प्रतिशतले घटेर रु ५१ अर्ब ९४ करोड पुगेको नेपाल राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो बर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २६.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो । यस्तै आव ०७१/७२ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँगको अनुपात २९.१ प््रतिशत रहेकोमा अघिल्लो आवमा यो अनुपात २९.६ प्रतिशत थियो ।
हुनत रेमिट्यान्सले दिगो बैदेशिक मुद्रा आम्दानी त गर्दैन तर पनि रेमिट्यान्सले धानेको अर्थव्यवस्थामा रेमिट्यान्स घट्नुले ठुलै झट्का दिन्छ । विदेशमा पसिना बगाएकै कारण एक छाक खान र लाउन सजिलो भएका तिनका परिवारलाई विदेशीने क्रममा गिरावट आएपछि असर पर्छ । नेपाल मात्र होइन विश्वका कतिपय देश रेमिट्यान्सकै कमाइले बाँचेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख सूचकहरु नियन्त्रणभित्र रहेको भनिएपनि समग्र आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक रहेन् । फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने देखिन्छ ।
विश्व बैंकले समेत रेमिट्यान्समा कमी आउनुले बैक तथा वित्तिय सँस्थाको खराव कर्जा बढ्न सक्ने ,चालु खातामा नोक्सानी आउने ,शोधानान्तर अवस्था कमजोर हुने जस्ता चेतावनी दिइसकेको छ । भुकम्पले थिलो थिलो बनेको आर्थिक अवस्थालाई नाकाबन्दीले झन गिरायो । देशको अर्थतन्त्रमा असर गरेका यी घटनापछि पछिल्लो समय घट्दै गएको रेमिट्यान्सले झनै चुनौती थपिदिएको छ ।